Indawo entle yokuHlala yobuKoloniyali eOsu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCharles
Le Retreat intle yeKoloniyali yinkqubo yethu yesibini yophuculo kwesi sakhiwo sika-1946. Eli gumbi linegumbi elinye linegumbi lokuhlala lipholile ngokwenene, lizolile, likwiplani elivulekileyo lokuhlala kwaye libekwe ngokukhuselekileyo kwisitalato sokuhlala kwindawo edlamkileyo yase-Osu, e-Accra. Ukucoca kunye nempahla. Izinto eziluncedo kunye ne-wifi zibandakanyiwe. Umgangatho unikwe yonke indawo.
Esi sakhiwo sibuyiselwe ngo-1946 lobukoloniyali kwaye iflethi yenye yamagumbi amabini abekwe kumgangatho wokuqala eyonwabela indawo eneendawo ngokwesilingi zawo eziphakamileyo, iifestile ezinkulu zaseFransi ezinokufakelwa kobhedu lokuqala, iibhalkhoni kunye nomoya oqaqambe ngokubanzi, umoya womoya obonakalisa iindawo zokuhlala. ixesha. Le ndlu ibonakaliswe ngekhitshi evulekileyo enesicwangciso esivulekileyo, indawo yokuhlala kunye neyokutya enebalcony edibanayo. Igumbi lokulala lidlalela izakhiwo ezibuyiselweyo zomgangatho weplanga, ibhedi elingana neKumkani kunye nebalcony yeJuliet ejonge kwigadi yale propati ingezantsi. Le ndlu iza inefenitshala epheleleyo, ine-air conditioning, icable/satellite TV kunye ne-wifi enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinazo zonke izinto eziluncedo zale mihla. Le flethi ibekwe kumgangatho wokuqala ngaphakathi kwendawo ebiyelwe ngodonga enokhuseleko lweyure ezingama-24 kunye negaraji yemoto ekhuselweyo kuphela.
4.77 ·Izimvo eziyi-98
4.77 · Izimvo eziyi-98
Ubumelwane baseOsu buchazwe njengeCovent Garden yaseAccra. Ibekwe kwi-2018 yi-Time Out Magazine njengeyona ndawo ipholileyo ye-20 kwihlabathi ukutyelela. Ukubuyela kuLwandlekazi lweAtlantiki kunye nokhetho olubanzi lwe "pub grub", indawo yokutyela kunye nobomi basebusuku onokukhetha kuzo, ibambe isihloko sayo esinqwenelekayo njengokubetha kwesixeko saseAccra. I-Osu ikwakufuphi nendawo engaselunxwemeni yabakhenkethi yaseLabadi kunye nekhaya leyona hotele indala yeenkwenkwezi ezi-5, ekwimizuzu nje emi-5 ukusuka kwigumbi lokuhlala. Iziza zembali ezifana neNqaba yeChristianborg yangaphambi kobukoloniyali e-Osu, i-Independence Square, iMarike yeZiko lobuGcisa noBugcisa kunye neJamestown (i-Old Accra), zonke zikwindawo ekufutshane neflethi.
Izimvo eziyi-1 166
Le flethi izimele yodwa kumgangatho wokuqala wesakhiwo kwaye ke ngoko nangona ikufuphi kwabanye, undwendwe luyonwabela ngokupheleleyo ngokubona kwalo unxibelelwano olunokuba nalo kunye nomnini-mhlaba okanye nabanye. Ubumfihlo obugcweleyo kunye nokhuseleko.
Le flethi izimele yodwa kumgangatho wokuqala wesakhiwo kwaye ke ngoko nangona ikufuphi kwabanye, undwendwe luyonwabela ngokupheleleyo ngokubona kwalo unxibelelwano olunokuba nalo k…